फर्कि आइन् ‘आँखामा आउने केटी’ - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यो संसारबाट बिदा लिइरहँदा पनि मेरो अगाडि क्यामेरा होस्ः निरुता सिंह
कृष्ण आचार्य काठमाडौं १ मंसिर
दक्षिणा, दर्पन छायाँ, माइती, मनमन्दिर, सिउँदोको सिन्दुर, आफ्नो मान्छे लगायत दर्जनौँ चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी निरुताले ‘सकेन्ड इनिङ’ मा ‘दाल भात तरकारी’ मार्फत त्यही माया कमाउन सक्लिन् त?
‘नाई नभन्नु ल ५’ को सुटिङका क्रममा दिलिप रायमाझीले पछाडिबाट आएर आफ्ना दुई हातले निरुता सिंहको आँखा छोपिदिए। उनले ऐनाबाट दिलीप आइरहेको पहिल्यै देखेकी थिइन्। त्यसैले उनको मुटुको चाल बढ्न थाल्यो। खुसीले यति गद्गद् भइन् कि मन भक्कानिएर आयो। जब दिलीपले आफ्नो हात निकाले तब निरुताको गहभरी आँसु थियो – खुसीको।
कुनै जमाना निरुता र दिलीपको जोडी नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा निकै जमेको थियो। नेपाली दर्शकका लागि उनीहरु सुपरस्टार थिए। जुन फिल्म खेलेपनि चल्ने। अभिनयमा उत्तिकै मीठास।
२०५० को दशकमा बाँधिएको यो जोडी लामो समय नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा रहेन। दिलीप अमेरिका हानिए भने निरुता भारत।
उनै दिलीपसँग पुनः सुटिङस्थलमा भेट हुँदा निरुताले खुसीका आँसु बहाइन्। त्यो लोकप्रियता, दर्शकको त्यो निश्चल प्रेमले अझै पनि बेलाबेला उनलाई घचघच्याइरहन्छ।
भारतमा रहँदा निरुताको नेपाली फिल्ममा फर्कने इच्छा कहिल्यै मरेन। किनकी फिल्म उनको जीवन हो। जीवन उनका लागि नेपाली माटो। अनि नेपाली माटो, दर्शक उनका लागि भगवान। जसले उनलाई निरुता सिंहबाट स्टार निरुता सिंह बनाइदियो। त्यसैले आज फेरि फर्किएर आइन् उही माटो, उनै दर्शक सम्झिएर।
त्यसो त ‘नाई नभन्नु ल ५’ मार्फत पाँच वर्षपछि निरुताको नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा पुनः आगमन भयो। तर, यसमा उनको रोल संकुचित छ। त्यसैले यसलाई उनी ‘कास्टिङ’ भन्न रुचाउँछिन्। ‘त्यस फिल्ममा मैले अतिथिको भूमिका निभाएकी हुँ, त्यसैले त्यो कास्टिङमात्र थियो, कमब्याक फिल्म नै भन्न नमिल्ला’ उनले भनिन्।
भारतको प्रडक्सन हाउसमा निरुताले त्यत्तिकै काम पाएकी होइनन्। उनकै भाषामा भन्ने हो भने नेपाली सुपरस्टार भनेर उनीहरुले निरुतालाई राखेका हुन्। त्यसैले त उनलाई लाग्छ, भारतमा बसेर पनि उनी नेपाली फिल्मलाई ‘रिप्रिजेन्ट’ गरिरहेकी थिइन्।
भारतमा रहँदा निरुतालाई नेपाली फिल्ममा अफर नआएका होइनन्। बीचमा केही फिल्म उनले खेलिन् पनि र खासै चलेनन् पनि। त्यसैले उनले आफूलाई चित्त बुझ्ने र अभिनयलाई न्याय गर्न सक्ने फिल्मको अफर आएमात्र स्वीकार्ने प्रण कसिन्।
निरुता भन्छिन्, ‘मैले हालसम्म थुप्रै रोलहरु गरेँ। त्यसभन्दा केही भिन्न होस् भन्ने चाहन्थेँ। त्यसैले उचित समयको पर्खाइमा थिएँ र अहिले त्यो समय आएको छ।’
यससँगै ४५ वर्षीया निरुताको नेपाली फिल्ममा ‘सेकेन्ड इनिङ’ सुरु भएको छ। अब उनी बीचमै हराउने पक्षमा छैनन्। राम्रा अफरहरुलाई स्वीकार्नेछिन्। किनकी उनका लागि फिल्म प्यासन हो। र, त्यो प्यासन अभिनयलेमात्र पूरा गर्न सक्छ।
‘म बुझ्ने भएदेखि नै जानेको काम भनेको यही हो, त्यसैले म फिल्मभन्दा टाढा रहन सक्दिनँ’, उनी भन्छिन्।
निरुता चाहन्छिन्– जब उनी यो संसारबाट विदा लिइरहेकी हुनेछिन् त्यतिबेला पनि उनको अगाडि क्यामेरा होस्। यो फिल्मप्रतिको उनको लगाव हो। त्यसैले उनलाई आफू कुनैबेला नेपाली फिल्म जगतको सुपरस्टार थिएँ भन्ने कत्तिपनि घमन्ड छैन। सायद उनको मुख्य विशेषता यही हो।
‘जीवन नै सिकाइको एउटा प्रक्रिया हो’, निरुता भन्छिन्, ‘हरेकपटक फिल्म गर्दा मैले नयाँ–नयाँ कुरा सिकिरहेकी छु र मलाई अझै धेरै सिक्नु छ।’
दर्शक तथा फ्यानले निरुतालाई फेसबुक, इन्टाग्राममार्फत म्यासेज गरेर फिल्ममा फर्कन आग्रह गरिरहन्थे। उनी पनि दर्शकको उस्तै माया देखेर मख्ख पर्थिन्। दर्शकको सोही मायाका कारण नाई नभन्नु ल ५ मा अभिनय गरिन् पनि। सबैले खुसी व्यक्त गरे। त्यसैले उनी अब दर्शकलाई निराश पार्न चाहन्नन्।
‘त्यसका लागि मैले आफ्नो अभिनयमा पनि बेस्ट दिने प्रयास गर्नेछु’ उनी भन्छिन्।
दक्षिणा फिल्ममा देखेपछि निरुतालाई दर्शकले ‘सपना भएर आँखामा आउने केटी’ भन्थे। पहिलो फिल्मबाटै उनी धेरैको मन, मस्तिष्कमा बस्न सफल भइन्। उनी हाँस्दा दर्शकहरु पनि सँगै हाँसे, उनी रुँदा रोइदिए। सबैले निरुतालाई आफ्नो घरको छोरी, बुहारी, चेली सम्झे। अब पनि निरुता दर्शकको त्यही माया चाहन्छिन्। त्यही साथ, त्यही सहयोग।
र, मुस्कुराउँदै भन्छिन्, ‘म पनि दर्शकलाई निराश पार्ने छैन।’
फिल्म खेलेर कसैले धेरै पैसा कमाए होलान्, कसैले थोरै। तर, निरुताले दर्शकको धेरै माया कमाएकी छन्। भारतसहित विश्वका जुनसुकै कुनामा जाँदा निरुतालाई चिन्ने, माया गर्ने नेपाली उत्तिकै छन्। उनलाई देख्नासाथ फोटो खिच्न आउनेको भीड नै लाग्ने गर्छ। उनले यही मायालाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो कमाइ ठानेकी छन्। र, यसमै गर्व गर्छिन्।
निरुता नेपाली फिल्ममा प्रवेश गर्दाको समय र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ। उतिबेला क्यामेरा म्यानले क्यामेराको लेन्सबाट हेरेको भरमा सुटिङ हुन्थ्यो। डाइरेक्टरले मनिटरमा हेर्न कहाँ पाउनु। अहिले नेपाली फिल्ममा पनि विज्ञान, प्रविधिको भरपुर प्रयोग हुने गरेकोप्रति उनी खुसी छन्। फिल्मको स्तर हेर्दा दंग पर्छिन्। गीतहरुमा प्रयोग भएका सिनहरु र एनिमेसनले उनलाई तान्छ। समग्रमा यसलाई उनी नेपाली फिल्मको विकास भन्न रुचाउँछिन्।
तर, निरुतालाई अहिले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा देखिएको एउटा कुरा पटक्कै मन पर्दैन। त्यो हो –अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। भन्छिन्, ‘उतिबेला स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। फलानोलेभन्दा मैले कसरी राम्रो गर्ने भन्ने हुन्थ्यो तर, अरुलाई नराम्रो देखाएर, तल गिराएर, निचो देखाएर कहिल्यै प्रतिस्पर्धा हुँदैनथ्यो।’
उनलाई अहिले पनि आफ्ना समकालिनहरु उत्तिकै प्यारा लाग्छन्। जल शाह, विपना थापा, झरना थापा र दिलीप रायमाझीलाई उनी खुबै मीस गर्छिन्।
भावुक हुँदै निरुता भन्छिन्, ‘उसको बुबा बित्नुभएको समयमा जलसँग भाइबरमा कुरा भएको थियो। दुवैजना निकैबेर रोयौँ। हाम्रो आँसु नै थामिएन।’
निरुतालाई सुटिङका हरेक दिन आफ्नो पहिलो दिन होजस्तो लाग्छ। उनमा २५ वर्षअघि अभिनय गर्दाको जुन उत्सुकता थियो त्यो आज पनि उही छ। त्यसैले उनी सधै काममा ११० प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन्।
दक्षिणा, दर्पन छायाँ, माइती, मनमन्दिर, सिउँदोको सिन्दुर, आफ्नो मान्छे, आमाको काखलगायतका दर्जनौँ चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी निरुताले अब आफ्नो ‘सकेन्ड इनिङ’ मा ‘दाल भात तरकारी’ मार्फत त्यही माया कमाउन सक्लिन् त?
समयले अवश्य बताउनेछ।
प्रकाशित १ मंसिर २०७५, शनिबार | 2018-11-17 13:50:35